Hack Hack Extension TikTok Monolid - Beauty
Levitra Vaovao Momba Ny Lamaody Hoditra Lakozia Maharitra Fampihenan-Danja Teknolojia Diy Gynaec Celeb Style Drafitra Sy Torohevitra
TikTok dia nampianatra ahy hack hack ho an'ny fanamafisana ny fanitarana
Ny fitiavako ny fanitarana volomaso dia voarakitra tsara . Efa nolazaiko, matetika, fa io no fitsaboana hatsaran-tarehy iray izay ho sarotra amiko indrindra ny manome azy, ary noho izany, mety ihany ny taona 2020 izay taona tokony hiainako tsy misy azy ireo. (Boo freaking hoo, fantatro.)
Hatramin'ny nianjerako farany tamin'ny volako tamin'ny volana martsa dia nandramako tamin'ny daroka diso sy ny fitombenan'ny eyeliner ary ny karazan-tarehy vita amin'ny masom-bolo isan-karazany amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana.
?????? #makeuphacks #manjamaso #lasheshack #monolid #monolidmakeup #monolideyemakeup #koreanmakeup #koreanmakeuptutorial #korean
? feo tany am-boalohany - cafemaddy
Indray alina, roa herinandro lasa izay, nanao ny famafana Internet tamin'ny alina (na dia fantatro aza fa iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra azoko natao talohan'ny hatory) ary sendra io aho Lahatsary TikTok an'ny zazavavy manao sary amin'ny kapoka misy lamba landihazo. Somary nisalasala ihany aho ny amin'ny hiafarany, saingy ny valiny farany dia nihoatra ny nantenako, ka ny ampitso maraina dia nanapa-kevitra ny hanandrana aho.
Jenny Jin ho an'ny PureWow
Voalohany, nanangona ny fitaovako aho, nametraka ny tenako tao amin'ny trano fidiovana, nilahatra tamin'ny fizarana podcast manaitra aingam-panahy (resaka io Cheryl Stray nanome nandritra ny iray tamin'ireo seho SuperSoul an'i Oprah tamin'ny taon-dasa, raha toa ka mila hyping ihany koa ianao) ary tonga amin'ny filaharana.
ny sarimihetsika tantaram-pitiavana indrindra indrindra hatramin'izay
Natomboko tamin'ny tsipika somary voafaritra tsara eo an-joron'ny masoko ivelany toa ny nasehon'ilay zazavavy tamin'ny lahatsariny. Mahatonga saina hanomboka conservative satria mora lavitra kokoa (ary tsy mikorontana) ny manampy tsipika maro kokoa taty aoriana noho ny manandrana manala izay mihoatra nefa tsy manosotra zavatra.
OK, fotoana hihemorana ary hanombatombanana ny asako avy amin'ny toerana hafa. Ity, hitako, no lakilen'ny fampiharana tsara ny eyeliner. (Misy fanoharana momba ny fiainana any, any ho any, izay azoko atao ihany koa rehefa avy nahazo kafe bebe kokoa aho.)
Na izany na tsy izany, hatreto dia afa-po aho. Ny felam-eyeliner kely dia manome ahy famaritana kely fotsiny sy fiakarana kely eo amin'ny zorony ivelany.
Rehefa nanomboka nanampy eyeliner sy santimetatra bebe kokoa teo akaikin'ny zoroko anatiny aho dia nivadika ho herisetra ny raharaha. Antony roa no nandray anjara tamin'io: 1) Tsy nitandrina aho tamin'ny fampiasana ny tendron'ny eyeliner hanoratanao ireo tsipika sisa tavela. Fa kosa, navelako hikasika ny hodi-masoko ny sisin'ny penina, izay nitarika an'ireo vongan-dranomainty tsy fahita hitanao nanondro ahy teto ireo. 2) Tsy navelako ho maina tanteraka ilay ranoka alohan'ny hamirapiratra ary vao mainka nanapotika ny ranomainty. Tsy niraharaha ahy io satria ny tutorial mazava tsara mampiseho an-drazazavavy maina ny masony alohan'ny handehanany amin'ny dingana manaraka.
Andao hanao zoom ho an'ny seky, mba hasehoko anao tsara hoe tsy manao.
Niafara tamin'ny famonoana ny ankamaroan'ny liner aho ary nanomboka indray, izay misy ny Q-tip voapotsitra remover. (Ireto swabs feno fonosana no tanjoko hamafana ireo tsipika mania satria afaka miditra amin'ireo tendro kely sy crannies ireo izy ireo ary tsy mamela kofehy landihazo any aoriana.)
ny fomba hifehezana ny volo latsaka
Araky ny ohabolana Maya Angelou malaza: Rehefa mahay tsara ianao, dia mihatsara kokoa.
Ho an'ny masoko havia dia nataoko izay hampiasaina ny tendrony eyeliner fotsiny mba hisarihana flicks mazava kokoa, ary nomeko azy ireo 30 segondra na maina mba ho maina tanteraka alohan'ny hamirapiratan'ny maso. Mba hanaovana izany, dia nifaninana tamin'ny filentehako aho, ary nandinika vetivety ny fiainako aho.
Ary ity ny valiny farany: Mbola misy asa eo an-dàlana, azo antoka, nefa ampy hizarana amin'ireo gals namana mitambatra any mitady fomba hafa hamoahana ny masony mahafinaritra.
Raha ny marina dia hitako io fikafika io miasa amin'ny endrika bikan'ny maso rehetra. Hanitsy ny fametrahana sy ny halavan'ny tsipika fotsiny ianao mba hifanaraka amin'ny bika aman'endrikao. Aza adino fotsiny ny miverina miverina eo anelanelan'ny filaharana hijerena ny toerana ilanao ampiana bebe kokoa — na hanamorana ny fivoahana.
Moa ve manolo ny lavaka be banga tavela teo amin'ny fiainako (sy ny lashline) tsy misy fanitarana volomaso intsony? Tsia, tsia. Saingy, tamin'ny fihodinana tsy nampoizina, heveriko fa nahita teknikan'ny eyeliner ihany aho tamin'ny farany izay malefaka kokoa, mendri-piderana, ary mora atao kokoa noho ny fijerin'ny saka saka izay tsy hitako mihitsy. tena nahatsapa fa mety tamiko. Ary raha tsy mahomby daholo ny hafa rehetra dia mipetraha amin'ny jiro tsara fotsiny.
Vidio ny endrika: Tifanso 200 manisa lamba landihazo mainty ($ 5); Eyeliner Poppy Liquid miboridana ($ 18); Shiseido Curler Eyelash ($ 22)
Mifandraika: Malahelo ny fanitarana nataonao? Kitapo fanaraha-maso an-trano an'i Lashify dia hahatonga azy rehetra ho tsara kokoa
Sokajy Tsy Maintsy Jerena Mpinamana Sy Fianakaviana Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy
fanafody very volo ao an-trano
ny fomba hifindranao amin'ny olona tianao
sarimihetsika romantika anglisy 2016
sarimihetsika indiana tsara indrindra amin'ny amazon prime
Baking soda dia tsara ho an'ny hoditra